Umgaqo wefayibha yesilivere kunye nokusetyenziswa kwayo kumalaphu
Ifayibha yesilivere inokuqhuba umbane ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ukukhusela ukothuka kombane emzimbeni womntu kunye nokukhusela umzimba womntu kumaza ombane.
Isicelo sokukhusela i-EMI
Iindidi ezininzi zeekhaka ze-EMI zinezinto ezahlukeneyo kunye neemilo, kodwa ngokubanzi eyona njongo iphambili kukunciphisa umda we-electromagnetic field.
Inqaku likuthatha ukuba uxoxe ngefilimu yokukhusela i-EMI
Yonke isekethe, isixhobo okanye inkqubo kufuneka yenziwe ngendlela eyiyo ukunciphisa amanqanaba emitha kangangoko ukufikelela kwimvakalelo kuphela kumanqanaba aphezulu emimandla ye-electromagnetic.
Ezo zinto malunga nefilimu ebonakalayo yesinyithi
Iifilimu ezibonakalisayo zinokwahlulahlulwa zibe ziindidi ezimbini, enye yifilimu ebonakalayo yesinyithi, enye ifilimu ebonakalayo ebonakalayo. Ukongeza, kukho ifilimu yentsimbi ebonakalayo ebonakalayo edibanisa zombini, esebenza ukonyusa ukubonakaliswa komphezulu womzimba.
Ukusasazeka kwefayibha yesilivere
Ifayibha yesilivere yimveliso enobuchwephesha obuphezulu efumaneka ngokudibanisa isigxina sesilivere esulungekileyo kumphezulu wefayibha ngobuchwephesha obukhethekileyo. Olu lwakhiwo aluvumeli kuphela ifayibha yesilivere ukuba igcine iimpahla zelaphu, kodwa ikwabonelela ngayo yonke imisebenzi yemilingo yesilivere, isiphumo somlingo sefayibha yesilivere.
Zithini iimpawu kunye nefuthe lamalaphu efayibha yesilivere?
Ifayibha yesilivere yimveliso enobuchwephesha obuphezulu efumaneka ngokudibanisa isigxina sesilivere esulungekileyo kumphezulu wefayibha ngobuchwephesha obukhethekileyo. Olu lwakhiwo aluvumeli kuphela ifayibha yesilivere ukuba igcine iipropathi zelaphu zentsusa, kodwa ikwabonelela ngayo yonke imisebenzi yemilingo yesilivere, isiphumo somlingo sefayibha yesilivere. Itekhnoloji yokuqala yokuvelisa ifayibha yesilivere yayisekwe kwinayiloni ye-6 njenge-matrix, isebenzisa i-electroless Itekhnoloji yesilivere yesilivere yokwenza umaleko wesingxobo sesilivere ngaphezulu kwifayibha yenayiloni.